कम्प्युटर फरम्याट गर्ने र Default Settings मा reset गर्ने तरिका
(आफ्नो कम्प्युटर फरम्याट गर्नु भन्दा पहिला आफ्नो महत्वपूर्ण फाइलहरु, डाटाहरु, प्रोग्रामहरु आदी को साथ साथै सम्बन्धित Driver हरु सबैको ब्याकअप राखुहोस् किनभने तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर फरम्याट गर्दा यि सबै मेटिन्छन । धेरै जसो कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम Drive C मा instal गरिएको हुन्छ । कम्प्युटरमा HardDrive को कती वटा partition गरिएको छ ? जस्तै Drive C, Drive D, Drive E आदि । Drive C मा अपरेटिङ सिस्टम instal गरिएको छ भने Drive C मा भएका (Save गरिएका) आफ्ना सबै महत्वपूर्ण फाइलहरुलाई अर्कै Drive D अथवा Drive E मा लगेर save गरिदिनुहोस् । )
अब कम्प्युटर फरम्याट गर्ने तरिका तिर अगाडि बढौ
१) सबभन्दा पहिला तपाईं सँग operating system सि.डि वा डि.भि.डि हुनु जरुरी हुन्छ र उक्त Disc तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरको सि.डि वा डि.भि.डि drive भित्र हाल्नुहोस् ।
२) अब आफ्नो कम्प्युटरलाई restart गर्नुहोस् ।
३) जब तपाईंको कम्प्युटर restart हुँदै छ तपाईंले screen मा "Press any key to boot from CD" भन्ने मेसेज आएपछि keyboard को कुनै कि प्रेस गरिदिनुहोस् ।
@ यदि तपाईंको screen मा यो मेसेज आएको छैन भने तपाईंले boot sequence reset गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि कम्प्युटरको BIOS settings भित्र जानु पर्ने हुन्छ । BIOS settings भित्र जान कम्प्युटर restart गर्नुहोस् , जब restart हुँदै छ तब कि बोर्ड मा Delete कि थिची राख्नुहोस् । केही सेकेन्ड पछि कम्प्युटरको स्क्रीनमा BIOS mode देखा पर्नेछ । त्यहा boot sequence options मा CDROM drive to be 1st option छान्नुहोस् र save चेन्ज गरेर exit गर्नुहोस् ।
४) अब फेरी स्टेप ३ दोहर्याउनुहोस् , सि.डि लोड हुनेछ र निलो स्क्रीन देखा पर्नेछ र सि.डि को फाइलहरु कपि हुन थालनेछ । एक छिन कुर्नुहोस् । केही मिनट पछि setup ? मेसेज आएपछि Enter गरिदिनुहोस् ।
५) अब windows install कुन Drive मा गर्ने अथवा कुन drive लाई Format गर्ने भन्ने option देखा पर्नेछ , तपाईंको कम्प्युटरको कुन Drive मा operating system install गरिएको छ त्यो drive छान्न्हुहोस् (Normally Drive C मा opereting system install गरिएको हुन्छ ) । छानिसके पछी Enter गर्नुहोस् ।
६) अब अर्को स्टेपमा कुन फाइल सिस्टम मा Drive Format गर्ने हो छान्नु पर्ने हुन्छ । NTFS option छिटो हुन्छ र formatting option "Quick" छान्नुहोस् र Enter थिच्नुहोस् ।
७) अब कम्प्युटर फरम्याट प्रोसेसमा गयो । कती बेरमा सकिन्छ त्यो भने कम्प्युटरको hard Drive को साइज र speed मा भर पर्छ ।
८) बिचमा टाईम place छान्नुपर्ने option आउन सक्छ । ओके ओके गरिदिनुहोस् ।
९) फरम्याट सकिसकेपछि opetating system files कपि हुन थालछ र install भईसकेपछि कम्प्युटर आँफै restart हुन्छ ।
१०) अब कम्प्युटरमा सम्बन्धित driver हरु एक एक गरी install गर्नुपर्ने हुन्छ , जस्तै Sound card, LAN card आदी आदी ।
लेखक: दिपक भट्टराई बाट 6:23 PM
अमृत June 25, 2011 at 5:28 PM
दिपक जि यो साह्रै राम्रो जानकारीको लागि मुरी मुरी धन्यवाद
Bijay June 25, 2011 at 5:30 PM
Very nice post thank u to sharing with us
very useful tips i like this post thanks
Ranjan July 7, 2011 at 2:46 PM
Itsagreat post thank u so much for this and i am waiting more like this .
ramailokhilang.com September 6, 2011 at 10:03 AM
good job man thak you4information